Raisul Wasaaraha Somalia oo ka qeyb galay Shirka Tubta Siyaasadda loo dhan yahay – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Raisul Wasaaraha Somalia oo ka qeyb galay Shirka Tubta Siyaasadda loo dhan yahay
MUQDISHO —Waxaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho shirkii Guddiga Tubta Siyaasadda loo dhan yahay ee Xafiiska Raisul wasaaraha oo todobaadkiiba mar la isugu yimaado.
Shirka maanta ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Somalia Mudane Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan golaha Wasiirada, oo ay ka mid yihiin Wasiirada, Cadaalada, Maaliyadda, Batroolka dastuurka, Guddoomiyaha gobolka Banaadir xubno ka socday Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, Wasiiru dowlaha Xafiiska Raisul Wasaaraha, Xoghayaha joogtada ah ee Xafiiska Raisul Wasaaraha iyo Masuuliyiin kale.
Waxaa kulankan si guud loogu falanqeeyey halka ay marayaan howlaha diyaar-garowga doorashooyinka la filayo iney dalka ka dhacaan sanadka 2020-ka, iyadoo laga soo jeediyey warbixino kala duwan oo arrintaas la xiriira.
Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa shirkan ku soo bandhigtay qabyo qoraalka qalfoofta hindise sharciyeedka doorashooyinka dalka iyo dib eegista sharciga axsaabta siyaasada dalka oo muhimad gaar ah u leh doorashooyinka laga qaban-qaabinayo dalka.
Sidoo kale, Warbixin ka la xiriirtay dib u yagleelida guddiyada degmooyinka, goleyaasha degaanka iyo habraaca loo marayo ayaa waxaa shirkan ka jeediyey Guddoomiyaha gobolka Banaadir Ing. C/raxmaan Yariisow oo arimahaas si qoto dheer uga hadlay.
Marwo Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey) oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka oo sidoo kulankaas hadal ka jeedisay ayaa iyana faahfaahin ka bixisay natiijooyinka ka soo baxay kulamadii wada-tashiga ahaa ee guddigu la yeeshay qeybaha bulshada, kuwaasoo la xiriiray doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadka 2020-ka.
“Wadatashiyada waxaan ku qabanay Magaalada Muqdisho iyo degaano ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ka jira, waxaana diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin doorka bulshada, amniga doorashooyinka, shuruucda doorashooyinka, Wacyiga dadwaynaha, Xisbiyada siyaasadda, arrimaha siyaasadda iyo maalgelinta doorashada” ayey tiri Xaliimo Yarey oo intaa ku dartay iney rajaynayso iney dalka ka dhacdo sanadka 2020-ka doorasho saxan oo sugan, kuna astaysan hufnaan, waafaqsan sharciga dalka kuna dhacda Jawi nabdoon.
Shirkan oo sidoo kale lagu falanqeeyey dib u qiimeynta qorshe howleedka tubta siyaasada loo dhan yahay ayaa waxaa ka hadlay Ra’isul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ka waramay muhiimada ay leeyihiin qodobada laga hadlay, isagoo u mahad celiyey dhamaan heyadaha dowlada ee ka qeyb galay shirkan oo uu ku amaanay dedaalka ay muujiyeen, isagoo kula dardaarmay iney howlahooda dardar-geliyaan si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah doorashooyin xalaal ah oo dalka ka dhaca sanadka 2020-ka.
Qormadii HoreHore Raisul Wasaare Khayre oo shir dib u heshisiin ah u furay beelo ku dagaalamay Gobolka Sh/hoose
Qormada XigtaKu Xiga Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo kormeer howleed ku tegay xarunta Wasaaradda Warfaafinta